कमेडियन कपिल शर्मासँग किन रिसाए यी चर्चित सेलेब्रेटीहरू? :: एजेन्सी :: Setopati
कमेडियन कपिल शर्मासँग किन रिसाए यी चर्चित सेलेब्रेटीहरू?
मुम्बई, पुस २२
कपिल शर्माले आफ्नो कमडी मार्फत् संसारभरका थुप्रै दर्शक हँसाएका छन्। मान्छेलाई खुसी बनाउने खुबी भएको भन्दै खुबै सरहाना पनि पाइरहेका हुन्छन्। चाहे कपिल शर्मा शोमा होस्, वा अवार्ड वितरण लगायतका अन्य कार्यक्रममा, कपिलले दर्शक हँसाउन कुनै कसर बाँकी राख्दैनन्।
यसमा पनि विशेषगरी कलाकारहरूलाई उनी आफ्नो कार्यक्रममा बोलाएरै हँसाउँछन्। उनको कार्यक्रम कपिल शर्मा शो फिल्म, गीतदेखि किताबसम्म प्रचार गर्ने थलो हो।
तर हँसाएरै आफ्नो जीविका धानिरहेका कपिलले अरूको मन पनि उत्तिकै दुखाएका छन्। कपिलले गरेका व्यवहारका कारण केही कलाकार उनीसँग रिसाएका टाइम्स अफ इन्डियाले लेखेको छ।
कपिलले मन दुखाएका वा उनीसँग रिसाएका केही कलाकारमध्ये सबभन्दा पहिले नाम आउने उनीनिकट रहेर काम गरेका सुनील ग्रोवर र चन्दन प्रभाकर हुन्।
टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार लामो समयदेखि सँगै काम गर्दै आएका सुनील र कपिलको झगडा धेरै पुरानो होइन। खासमा सुनील र कपिलको झगडा उनीहरूकै सहकर्मी चन्दन प्रभाकरबाट सुरू भएको थियो। मदिराले मातेका बेला कपिलले आफ्ना स्कुलदेखिका साथी चन्दनलाई दुर्व्यहार गरेका थिए।
त्यही बेला सुनील आएर कपिललाई रोक्न खोजे। तर झगडा साम्मे हुनुको साटो चर्कियो। यसपछि चन्दन त कपिल शोमा फर्किए, सुनील भने बाहिरिए।
त्यस्तै कपिलसँग रिसाउने अर्का कलाकार हुन् मुकेश खन्ना। गत वर्ष महाभारतका कलाकारहरू कपिलको कार्यक्रममा आएका थिए। भिष्मको अभिनय गरेका मुकेश खन्ना भने आउन चाहेनन् र उनले पछि आफू किन आउन सकिनँ भन्नेबारे सामाजिक सञ्जालमा व्याख्या नै गरे।
त्यसमा उनले कपिलको कार्यक्रम 'भल्गर' (अश्लील)भएकाले जान नचाएको उल्लेख गरेका थिए।
उनलाई कपिलको कार्यक्रममा हुने द्विअर्थी कुराकानी र मजाकहरू मननपरेको बताएका थिए। त्यस्तै मुकेश खन्नाले पुरुष कलाकारलाई महिलाका रूपमा देखाइएकोमा पनि असन्तुष्टि जनाएका थिए। यति मात्र होइन, उनले कपिल शोका चुट्किलाहरूलाई वाहियात पनि भनेका थिए।
सन् २०१७ मा एकपटक अभिनेता अजय देवगन पनि कपिलसँग खुबै रिसाएका थिए। कपिल शोका लागि अजय देवगन 'बादशाहो' फिल्मको टोलीसँगै सुटिङ गर्न पुगेका थिए। तर कपिल आइदिएनन्।
१५ मिनेटसम्म पनि नआएपछि अजयले सुटिङ सेट नै छाडेर हिँडे। तर पछि कपिल बिरामी भएको खबर पाएपछि आफू नरिसाएको पनि अजयले बताएका थिए।
टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार सन् २०१५ मा अभिनेत्री दिपाली सायदले पनि कपिलले मदिराको नशामा दुर्व्यवहार गरेको गुनासो गरेकी थिइन्।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, पुस २२, २०७८, ०४:३७:५९
यस्तो छ प्रियंका र निकको २ करोड डलर पर्ने घर (तस्बिरहरू)
सामन्था-नागाको डिभोर्सबारे बोल्दै नागार्जुनले भने- नागालाई मेरो पिर थियो
यस्तो छ भूमि पेडनेकर र राजकुमार रावको 'बधाइ दो' को ट्रेलर (भिडिओ)
भिड्दै छन् रामचरण-एनटिआर, अक्षय कुमार र रणवीर कपुर!